Kushanda kweSjHZS90-3B Xixiayuan Water Conservancy Project | Shantui
Kongiri Batching Midziyo
Yekutengesa Konkrete Batching Miti
Kongiri Rori Musanganiswa
Asphalt batching chirimwa
Mugwagwa Wekusanganisa Mugwagwa
Conrete irikupa Zvishandiso
Kuvaka & Kuparadza Tsvina Dzinorasa Midziyo
Duri Kusanganisa Plant
Yakaomeswa motar chirimwa
Kushanda kweSjHZS90-3B Xixiayuan Water Conservancy Project
Nguva yekuvaka: Gunyana 2020
Yekushandisa munda (yeinjiniya mhando): kurima, masango uye kuchengetedza mvura
Mhando yemidziyo: kongiri yekusanganisa michina
SjHZS90-3B simende silo ndeyevatengi yekare siro.
MunaGunyana 2020, iwo maviri SjHZS090-3B kongiri batching zvirimwa zveShantui Janeoo zvakabudirira kupedzisa kumisikidza nekutumirwa uye zvakaendeswa kune vatengi pakuvaka Xixiayuan Water Conservancy Project.
Tichivimba nezvakanaka zveyero yepamusoro yekuita uye mashandiro akanaka, kambani yekongiri batching chirimwa inogadzira mhando yepamusoro kongiri yezvakasiyana maratidziro zvichienderana nezvinodiwa nevatengi, ichipa zvakakwana mbichana zvigadzirwa zvekuvakwa kwemapurojekiti ekuchengetedza mvura yeXixiayuan uye kuburitsa sosi dzesimba. Uku zvakare kushandiswa kunobudirira kwemidziyo yekambani kune makuru-epasirese emvura zvirongwa zvekuchengetedza mvura mushure meCentral Yunnan Water Diversion Project.
Iyo Xixiayuan Water Conservancy Project ndeimwe yemakumi manomwe nematanhatu ekuchengetedza mvura epasirese uye mapurojekiti emvura. Iyo purojekiti inosanganisa kugadzirwa kwemagetsi uye inotarisa mashandisirwo akazara emvura uye kudiridza. Iko kuyerera kwemvura kusagadzikana kwakaburitswa muXiaolangdi Reservoir kunoshandurwa kuita kuyerera kwakadzikama kuve nechokwadi chekuenderera kuyerera kweYero Rwizi. Panguva imwecheteyo, inobvisawo zvisizvo iyo Xiaolangdi Hydropower Station yepamusoro yekuveura nzizi murwizi rwizi. Mhedzisiro inoita basa rakakosha mune ecology, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, uye maindasitiri uye ekurima ekugadzira mvura.
Post nguva: Nov-03-2020
Kwete, 268, yekumaodzanyemba duandian mugwagwa, Jinan, Shandong Province